Space ကိုသန့်ရှင်း & စူပါဖုန်း Cleaner | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » Space ကိုသန့်ရှင်း & စူပါဖုန်း Cleaner
Space ကိုသန့်ရှင်း & စူပါဖုန်း Cleaner APK ကို
> သင်၏ကိရိယာခဲဖြစ်လာခေတ်နောက်ကျပြီးသုံးတဲ့အခါနှေးခဲ့ပါသည် DualSpace?
> သင်၏ Android apps တွေအတွက်အာကာသထဲက run ပြီလောအာကာသ Clean & စူပါဖုန်း Cleaner နေရာလွတ်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအခမဲ့အရှိန်မြှင့်ရန်သင့်လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုပါ!
Space ကိုသန့်ရှင်း & စူပါဖုန်း Cleaner အစွမ်းထက်အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းသန့်ရှင်းတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီဖို့ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှအလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းတဲ့ cache ကို DualSpace junk သန့်စင်, အမြန်နှုန်းသန့်စင်, အကြောင်းကြားစာသန့်စင်ခြင်းနှင့် WhatsApp ကို Cleaner ပိုမိုသိုလှောင်မှုနေရာလွတ်, လျင်မြန်စွာပြေး။
one-Tap စနစ်နှင့် app ကို cache ကို, အချည်းနှီး apk ဖိုင်များ, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, အေဒီ Junk အပါအဝင် Junk ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်နေရာလွတ်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်။
-အလင်း - အဆိုပါအထုပ်သာ 4MB
-လွယ်ကူသော - အာကာသကိုတက် Free နဲ့တကယ်တကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏ဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်
-လျင်မြန်စွာ - အနိမ့် memory နဲ့ CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအကျိုးရှိစွာ
===== မီးမောင်းထိုးပြထားသည် =====
★မြန်နှုန်း Cleaner - နေရာလွတ်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်တကိုထိပုတ်ပါဖုန်းကိုသန့်စင်
★သတိပေးချက် Cleaner - အားလုံးအသုံးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ compile သူတို့ကိုနှုတ်ပိတ်
★WhatsApp ကို Cleaner - စင်ကြယ်သော WhatsApp ကို Junk
★junk Cleaner - သန့်ရှင်းတဲ့ Junk ဖိုင်များကို, app ကို cache ကိုဖိုင်များ, အသုံးမကျ apk ဖိုင်များ, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, အေဒီ Junk
ပင်မ Functions များ:
·အတိမ်အနက်အတွက်စကင်ဖတ် - ဆိုကျန်နေတဲ့ခြင်းမရှိဘဲ, စနစ်နှင့် app ကို junk ထွက်ရှာတွေ့ထိထိရောက်ရောက်အစာရှောင်လျက်, ဟာ advanced scanning engine ကိုပေါင်းစပ်ပြီး
·ဘက်စုံ junk စင်ကြယ်သော - အသိဉာဏ်သန့်ရှင်းတဲ့အသုံးဖိုင်များ, ကိုပိုမိုသိုလှောင်မှုနေရာလွတ်, သင့်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
·အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းတဲ့ - ပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ scaning ကနေသင်အမှန်တကယ်ပဲတကိုထိပုတ်ပါကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
·သန့်ရှင်း apps များ '' ဒေတာ - batchly သန့်ရှင်းတဲ့ Apps များအားပြန်ဖြုတ်ရန် & အော်တိုသူတို့ရဲ့ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေရှင်းလင်း။
·မှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်မှုသန့်စင် - ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်သန့်စင်မြှင့်တင်ပေး device ကိုမြန်နှုန်း & running အာကာသ။
·သန့်ရှင်း cache ကို - သန့်ရှင်းတဲ့စနစ်က cache ကို, ကြော်ငြာတွေ cache ကို & apps များ '' cache ကို Junk ဖိုင်များကို။
·အသုံးမပြုတော့တဲ့ APK ကိုသန့်စင် - သင့်စက်ပေါ်ရှိ Uninstall အ APK ကိုဖိုင်တွေကို clean up ။
·အကြွင်းအကျန်ဖိုင်သန့်စင် app ကို - ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အက်ပ်များမှအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းတဲ့ကျန်နေတဲ့ junk ။
သန့်စင်· Big ဖိုင်တွေ - စသည်တို့ကိုရွေးချယ်စင်ကြယ်သောအချည်းနှီးဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ,
နှေးကွေးသောဖုန်း· One-ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုး - အစာရှောင်ခြင်း, စင်ကြယ်ဖုန်းကို junk, တကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်။
·သိုလှောင်သန့်စင် - ဖုန်းကို memory space ကို & ထိရောက်သောမှတ်ဉာဏ်သန့်စင်ဘို့ Optimizer ။
· Clean RAM ကို - ဖုန်းကို RAM ကို & မြန်နှုန်းဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ RAM ကိုသန့်စင် & RAM ကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်။
· Cleaner Boost - အဆင့်မြင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ပေးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းတဲ့ဖုန်းကို junk သော။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ application ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုကြယ်ငါးပွင့်ချီးမွမ်းကျေးဇူးပြုပြီး, သင့်အားပေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးလှုံ့ဆျောမှုပါ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ e-mail ပို့မှကြိုဆိုပါတယ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဂုဏ်ပြုကြလိမ့်မည် (အီးမေးလိပ်စာ: ludashiinternational@gmail.com)!
လွယ်ကူသန့်ရှင်း - အပေါ့ပါးဆုံးဖုန်း Cleaner ရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ပိုကောင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက် optimized -Details
Space ကိုသန့်ရှင်း & စူပါဖုန်း Cleaner
4.35 ကို MB
TT မြန် Cleaner - ...